Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 13, 2019 00: 30 No Comments
Dhakhtar ayaa baaray gabadha yar yar ka hor arooska waxayna xaqiijisay in geelu ay wali sii wadi karto. Aad baan ugu faani karnaa waxqabadkeeda, Brelyn Bowman ka hadlayay Instagram. Dhanka kale, aabahay, ayaa sharaxay Buzzfeed : "Waxay rabtay inay igu sharafto adoo igu caddeyneysa inuusan ninna taaban ninkeeda hortiisa.»
Saddex carruur ah oo wadaad ah ayaa wada saxiixay aabahood iyaga oo da'doodu ahayd 13 sano, oo ku ballanqaadday in ay sii socoto daahir ilaa guurka. Wiilka kaliya ee kooxdu ma ixtiraamaan heshiiska. Jawaabtu waxay tahay in hadiyaddan la yaabka leh, in la xanibo ay badan yihiin. Qaarkood waxay ku ammaanaan kalsoonida gabadha yar. "Gabadha bikrad ah ee dumarku waa hanti ugu qaalisan. »
Qaar kalena waxay ku murmayaan doorasho: "Qiimaheena sida qof aan waxba u lahayn wax ka qabashada nooca boogaha ama tirada xiriirada galmada ee aad horey uheshay," ayaa lagu yiri. Ama mar labaad: "Haweenka aan gaboobin habeenkii arooskooda ma ahan kuwo aan waxyeello lahayn ama ay sumoobeen ama aan dhammaystirneyn. Adiga, maxaad u malaynaysaa?
Sep29 08: 19